कृषिविद राई भन्छन् : सलह सिद्रा माछाभन्दा पोषिलो हुन्छ, वि’ष हालेर नमा’र्नू – Sanchar Patrika
कृषिविद राई भन्छन् : सलह सिद्रा माछाभन्दा पोषिलो हुन्छ, वि’ष हालेर नमा’र्नू
June 28, 2020 427
काठमाडौं : भारतको बिहार र उत्तर प्रदेश हुँदै सलहको बथान नेपाल छिरेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपायबारे अहिले अनेक बहस भइरहेका छन्। कृषि मन्त्रालयले नेपालमा सलह आउँदै नआउने दा’बी गरिरहेका बेला शनिबार बारा, सर्लाही, रुपन्देही र कपिलवस्तुसहितका जिल्लामा सलहको ठूलो समूह देखियो। उक्त समूहले अन्यत्र भन्दा रुपन्देहीमा केही बढी क्ष’ति गरेको बताइएको छ। सलहको समूह दक्षिणबाट उत्तरतर्फ चलिरहेको हावाको बेगसँगै शनिबार राति नै पहाडी जिल्लामा पुगेको छ।
भारतमा रहेको सलहको बथानमा थोरै मात्रामा नेपाल छिरेकाले क्ष’ति कम गर्ने दा’बी’ कृषि मन्त्रालयले गरेको छ। प्रदेश ५ सरकारले त शनिबारै सलह समातेर ल्याएमा प्रतिकेजी २० रुपैयाँ दिने घोषणा नै गरेको छ। सलह नियन्त्रणको उपाय खोजिरहेका बेला कृषिविद् मदन राईले वि’षादी हालेर नमार्न आग्रह गरेका छन्। उनले वि’षादी हालेर मा’र्नुभन्दा समात्न आग्रह गरेका छन्।
खोटाङमा नै आधुनिक पद्धति अपनाएर उनले कृषि कर्म गरिरहेका छन्। राईले सलह सिद्रा माछा भन्दा पनि पोसिलो हुने बताएका छन्। ‘सिद्रा माछा भन्दा पोसिलो छ सलह’, उनले भनेका छन्, ‘दाना बनाउन काइदा हुन्छ। कसैले समात्यो भने म एक हजार केजीलाई ताजा सुकाएको दुवैलाई १ लाखमा किनिदिन्छु।’
उनले सलह रोक्न समात्ने उपाय नै सही रहेको पनि बताएका छन्। ‘सरकार! सलह रोक्न विष नछर्क। केजीको ५० देखि १०० रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरि देऊ, सबै सकिन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘मान्छेको खाना र पशुपंछीको दानामा गजब हुन्छ।’
कसरी समात्ने? उनकै शब्दमा
यो बाक्लो आयो भने अलिक ठूलो कपडा दुईजनाले दुई छेउमा तानेर सलह छैकौं। एकै ठाउँमा एकैपटक पाँच दश किलो समाउन सकिन्छ। पातलोलाई पनि समाउने वा खेदेर बाली जोगाउने। सलह सबैजसो पंछीको खाना हो। जंगली पंछी पनि मोटाउने भो। मूख्य कुरा हाम्रो धान कोदो, मकै, आलु, तरकारी फलफूल बाली जोगाउनु हो। घाँस पनि जोगाऊँ। तर पहिले अन्न।
कसैले समाएर ‘सुभद्रा-मदन फाउण्डेशन’मा ल्याइदिए किलोको नगद १०० रुपैयाँले १००० किलोसम्म ल्याए नगद १ लाख भुक्तानी हुनेछ। हामी एक हजार किलोमध्ये भुटेर माछा मासुको सट्टामा विभिन्‍न परिकार बनाएर विद्यार्थीलाई खुवाउँछौँ। केही हामीसँग भएको पशुपंछीको दाना बनाउँछौं। सिद्राको सट्टामा यो प्रयोग गर्नेछौं। केही हामीसँग भएको सबैखाले पंक्षीलाई ख्वाउनेछौं। तर यसलाई मा’र्ने बहानामा वि’ष किनेर घु’स नखाऊँ, अनि वातावरण वि’षालु नबनाऊँ।
Prevदोलखाबाट एक गर्भवतीको हवाई उद्धार
Nextलकडाउनका बेला सवारी दुर्घटनामा परी प्रदेश १ मा ४१ जनाको मृत्यु
मिसाएर खानै नुहुने यी ९ खानेकुरा, नत्र कुष्टरोग लाग्ने खतरा !
अत्यन्त जरुरी सुचना : कक्षा ११ मा भर्ना हुन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को
विश्वलाई नै खुशीको खबर ! को’रोनावि’रुद्धको खोप परीक्षण सफल, बजारमा उपलब्ध हुँदै, [ जानकारीको लागी सक्दो शेयर गरौँ ]